amaholide nge-swimming pool e-Tuscany - I-Airbnb
amaholide nge-swimming pool e-Tuscany
Gavignano, Toscana, i-Italy
U-Elisa Ungumbungazi ovelele
Ifulethi, elifakwe ngesitayela saseTuscan elinemishayo eveziwe, liyakwazi ukuhlalisa abantu abangu-2 futhi liqukethe ikhishi elinendawo yokudlela, igumbi lokulala eliphindwe kabili, igumbi lokugezela.
Ifulethi linendawo yangaphandle enetafula nezihlalo, ilondolo encane, ihhavini lezinkuni nezoso, indawo yokubhukuda, i-wi-fi.
Ngenxa yendawo yayo ekahle iyindawo ekahle yokuqala yokuvakashela ngesikhathi esifushane izikhungo ezinkulu zezivakashi zaseTuscany ezifana neSan Gimignano 14 km, Colle di Val d'Elsa 10 km, Monteriggioni kanye neCertaldo 15 km, iChianti 16 km, Siena 30 km, Florence kanye Volterra 40 km.
Kodwa futhi kuyindawo ekahle yokujabulela amaholide uphumule ngokugcwele futhi uxhumane nemvelo, ukuhamba ukhululekile emasimini, uzipholise echibini, ukufunda incwadi enhle engadini noma ukumane uqhamuke ingilazi yewayini ekushoneni kwelanga.
Izivakashi zizokhululeka ukuhambahamba ezivinini nasezindaweni zeminqumo kule ndawo, ziphumule echibini noma zibe nendawo yokosa inyama enezinkuni.
Ngaphandle phezu kwesakhiwo i-pool
Inombolo yepholisi: 052022LTN0003
Hlola ezinye izinketho ezise- Gavignano namaphethelo